Dagaal saddexaad miyaa dunida ka qarxi doona? - Caasimada Online
Home Warar Dagaal saddexaad miyaa dunida ka qarxi doona?
Dagaal saddexaad miyaa dunida ka qarxi doona?
Muqdisho (Caasimada Online)-Dagaallada ka taagan dalka Suuriya ayaa horseeday in quwado waawayn ay faraha lasoo galaan xaaladda dalkaasi.
Dagaal saddexaad miyaa dhici kara?